Filimka Lipstick Under My Burkha oo ah mid haweenka dalkaasi ka hadlaayay oo hore looga mamnauucay dalkaasi ayaa ugu dambeyn soo gudbay waaxda faafreebka filimada dalkaasi kaidb markii laga jaray qeybo badan oo ay u arkeen in la faafreebo. Filimkan ayaa laga sameeyay qiso ku saabsan...
Doorashada dalka Mareykanka ka dhici doonta sanadka 2020 ayaa waxaa laga yaabaa inuu u tartamo madaxweynaha dalkaasi 32 jirka taajirka ah ee leh bogga caanka ah ee Facebook ee lagu magacaabo Mark Zuckerberg oo waayahan dambe xiiso gooni siinayay cilmiga iyo siyaasadda dunida. Mark Zuckerb...
Fanaanadda Mareykanka Beyonce Knowles ayaa la xaqiijiyay in ay isbuucaan dashay laba caruur mataano ah wiil iyo gabar ah. Waxaa lagu soo warramayaa in ay mataanhan ku dhasheen kahor xilligooda iyadoo lagu hayo dhallada caruurta lagu xanaaneeyo.Beyonce iyo ninkeeda heesaaga raabka ee Jay...
Daawo Aishwarya Rai xiligii ay ku guuleysaneysay Miss World sanadkii 1994
Gabar madow ah oo ku guulaysatay tartanka quruxda Miss USA.
Barkhad Abdi oo soo wado filim cusub oo Dabka lagu magacaabay.
Jilaaga Soomaaliyeed ee Hollywood Barkhad Abdi ayaa soo wada filim kale oo Mareykan ah oo ka hadlaya qisa ku saabsan burcadeeda Soomaalida , Filimkan oo lagu magacaabo Dabka ayaa waxaa lagu matalay meel u muuqaal xeebaha Soomaaliya iyadoo qisada filimkana ay ka turjumeyso Canadian nin ah oo la kulma...
Nin u muuqaal eg cayaaryahanka Messi oo Iran lagu xeray buuqii dadka dartiis.
Reza Parestesh oo ah wiil Iiraani ah oo 25 jir ah ayaa waxuu noqday shaqsiga kaliya ee dunida ee aadka u shabbahay cayaaryahanka Barcelona Lionel Messi, isagoo aanba laga aqaanain sida ah iskugu egyahiin darteed. Waxaana taas ay dhalisay in dadkii magaalada ay kuso buuqeen iyadoo qof walib...
The Weeknd iyo Selena Gomez oo xaqiijiyay in ay lamaane noqdeen
The Weeknd iyo Selena Gomez oo xaqiijiyay in ay lamaane noqdeenFanaanka reer Canada ee kasoo jeeda Ethiopia ee lagu magacaabo The Weeknd ayaa xaqiijiyay inuu ku qabsaday , oo ay lamaane jaceyl noqdeen fanaanada selena Gomez oo u dhalatay Mareykanka, hooyada dhashay selena ayaa xaqiijisay iyadoo kuso...
Filimkii Salman Khan ee Tubelight oo ugu dambeyn soo baxaya isbuucaan.
Jilaaga Bollywood ee Salman Khan ayaa waxuu shaaciyay inuu filimkiisii Tubelight ee aadka loo sugayay uu soo baxayo 5 maalmood kadib taasoo ku beegan isbuucaan. Filimkan ayaa ah mid Shiinees iyo Hindi ah waxaana la jilaga jilaaha Zhu Zhu ee shiinaha u dhashay, iyadoo uu soo saaray Kabir K...
David Beckham oo timaha kusoo celiyay qaabkii 14 sano kahor uu xeran jiray
Cayaaryahanka reer Ingiriis ee lagu magacaabo David Beckham ayaa waxuu timaha kusoo ceshtay qaabkiisii lagu yaqaanay 13 sano kahor isagoo kor u xertay. Beckham ayaa waxuu qaabkaas ka dhigan jiray xiliguu u cayaari jiray kooxdii Manchester iyo waliba Real Madrid. Waxaa uu haatan soo celiyay...
Mr Bean oo sheegay in uu soo celinayo filimadiisii qosolka badnaa, isagoo dib u jilaya aflaam cusub
Jilaaga Biritshka u dhashay ee caanka ku ahaa ee qosolka iyo majaajilada ee lagu magacaabo Rowan Atkinson oo Mr Bean loo yaqaan ayaa sheegay inuu soo celinayo oo uu dib u sameynayo qeybo cusub oo ah filimkii Mr Bean ee dunida qosolka ku reebay. Mr Bean ayaa waxaa filimadiisa ay caan...
Tyga iyo kylie Jenner oo xeriirkoodii burburay.
Fanaanka heesaha raabka qaada ee Tyga ayaa ku gacanseyray sii wado xeriirka jaceyl ee uu 3 sano la lahaa gabadha modelka ah ee reer Kardashian ee lagu magacaabo Kylie Jenner.Tyga ayaa waxaa la sheegay in haatan uu la kulmay gabar kale oo uu doonayo inuu la jaan qaado xeriir cusub , taasoo niya...
Chris Brown oo markale laga gudbiyay dacwad.
Fanaanka weyn ee Mareykanka u dhashay ee Chris Brown ayaa waxaa laga gudbiyay dacwad ka dhan kadib markii la sheegay in uu gacanta ula tagay nin sawir qaade ahaa oo kalaab lagu caweeyo oo ku yaala Florida sawir kaga qaadayay , isagoo garaacay ninkii sawir qaadaha ahaa. Booliiska aya...
Fast & Furious 8 oo jabinaya rikoorkii filimka Star Wars.
Filimka cusub ee mareykanka ah ee Fast & Furious 8 ayaa u muuqda mid tartan kula jira rikoorka qiimaha filimkii Star Wars ee soo baxay sanadkii 2015 , waxaana uu haatan filimka F8 uu todobaadkii u horeeyay beegsaday aduun gaaraya 533 milyan oo doolarka mareykanka ah taasoo garabka ku haysa filim...
Jilaaga Richard Gere oo gacal la wadaagay haweeney 32 sano ka yar asiga.
Jilaaga Hollywood ee lagu magaacabo Richard Gere oo 67 jir ah haatan caankana ku ahaa filimkii Pretty Woman ayaa waxuu wehelkiisa nolosha ka dhigtay haweeyney 32 sano ka yar asiga, waana gabar isbaanish ah oo moodel ah oo lagu magacaabo Alejandra Silva oo 35 ah i...